Dalxus Media Group » WARBIXIN: Ma KMG baa dalka lagu celinanayaa?Dalxus Media Group
WARBIXIN: Ma KMG baa dalka lagu celinanayaa?
Haddaad maqashaan dowlado shisheeye ayaa madaxda Soomaalida heshiisiinaya oo wada hadal isugu keenahaya, hala yaabina sababtu waxaa weeye dowladdii dhexe waxay gabtay kaalinteedii ku aadanayd dib u dhiska dalka, baahinta nidaamka dowladnimo taas beddalkeedana waxaa ay madaxda Mandate-ka ama waqtiga dowladda federaalka heysata (Farmaajo & Kheyre) ay noqdeen rag #Xamran (Macangag Boqran) waxaa sidaa ku dhahay waxa ay tahay eeg kaalintii Dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee la xidhiidhay sida go’aannada siyaasadeed ee masiiriga, doorashooyinka iyo amniga midna ma doonayaan inay ka talageliyaan dowlad goboleedyada inta aynu ka aragno muddada sanadka iyo seddexda bil oo ay dowladdani shaqeyneysay.
Ogoow Akhriste, dalku waa federal maadaama ay sidaa tahayna dastuurka KMG ee dalku ku dhaqmayo haatan waxaa ku taal in talada, awoodaha iyo arrimaha kale ee siyaasadda Soomaaliya la xidhiidha inay yihiin kuwa dhinacyadu wadaagayaan.
Su’aashu waxaa weeye, waa ayo cidda masuuliyadda qaadanaysa?
Masuuliyadda wixii dalkaan ka kharribma waxaa qaadanaya madaxda waqtiga dowladda heysata haseyeeshee shacabka Soomaaliyeed ee colaadaha, abaaraha iyo dhibaatada kale ragaadiyeen ku dhowaad 30-kii sano ee la soo dhaafay ayaa ah kuwa ugu nasiibka xun, maadaama dowladnimadii ay hamuunka u qabeen ay rajadeedii idlaanayso(Waxaa kaliya isbedallaya waxaa weeye kuraasta, ee hanaqaad dowladnimo ma muuqdo)!
Taas waxaa tusaale kuugu filan isku tolnaantii ka dhex jirtay dowladda FS iyo maamullada iyo arrimaha siyaasadda iyo ammaanka oo hadda noqday marxalado maraya meel aad uga hooseysa hal sano ka hor markii MW hore Xasan Maxamuud uu xilka ku wareejinayay MW Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirka Baydhabo oo qorshaha uu ahaa in maanta la soo afjaro ayaa dib u dhacay, madaxda dowladda & kuwa maamullada waxay qaadanayaan kulamo kale oo ajandaha shirka markii hore aan kamid ahayn, sababta ayaa lagu sheegay in isku mowqif aan laga ahayn in sida madaxtooyada Soomaaliya ay u wajahayso dhisidda ciidanka iyo arrimaha siyaasadda oo ay sii dheer tahay tan doorashooyinka 2020-ka.
Dad siyaasiyiin iyo aqoonyahanno isugu jira oo darsa siyaasadda Soomaaliya oo aan arrimahani kala sheekeystay ayaa ii sheegaya in xaaladdu haddii ay sidaan ku sii socoto in deeqbixiyeyaasha iyo dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ee shisheeyaha ay soo faragaliyaan khilaafka madaxda dowladda iyo maamullada, sidii xilligii KMG dalku uu ku jiray oo kale.
Ku darso Akhristoow in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo uu tiro ka laba jeer ballan qaaday in dowladdiisu noqon doonto mid ka badbaada faragalinta Shisheeye (Khudbadihii Farmaajo uu jeediyay ololihiisa musharraxnimada iyo xafladdii caleema saarka ayuu ku ballan qaaday, bishii Feb. 2017)!
Waxaa sidoo kale jira in xukuumadda RW Xasan Cali Kheyre aynaan la imaan shaqadii laga sugayay marka loo eego xagga baahinta dowladnimada, waxaan xasuusanaa in xukuumadihii ka horreeyay ay wada shaqeyn fiican lahaayeen gobollada oo ay u dambeeysay tii Senator Cumar Cabdirashiid Sharmaarke.
Waxaa kaloo intaas dheer, maanta amniga ayaa laga hadlayaa wasaaraddii difaaca waxaa bill gudahood muddo sanad ah isku beddalay seddex Wasiir oo dhammaantood aan laheyn aqoon ciidannimo lama yaqaan sababta Raysal wasaaruhu u doorbiday inta illaa hadda la og yahayna waa awood qeybsiga xilalka!
Midna ku sii darsoo, wasiirka cusub ee dhowaan loo magacaabay wasaarada Gaashaandhigga Xasan Cali ma yahay nin aqoon u leh arrimaha ciidanka? CV-giisa yaa ii keeni kara, horta ma leeyahay?! Adinka uun soo raadiya taas inaan idiin la wadaago ma rabee!
Kaaga darane, bishii tagtay guddoomiyihii maxmamadda sare dalka masuulkii loo magacaabay Baashe Yuusuf waligii garsoore maxkamadeed iska daayee mid ciyaarana ma noqon!
Maxay kula tahay in waxa qaldan dowladdu ku sixi karayso, diyaarse ma u tahay, ka dhiibo aragtidaada akhriste?!